ပုံစံ(၄) အငြိမ်းစား တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာဝယ်ယူခွင့် လျှောက်လွှာ | Ministry of Construction
ပုံစံ(၄) အငြိမ်းစား တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာဝယ်ယူခွင့် လျှောက်လွှာ
လျှောက်ထားသူ အမည် *
၁၂၃၄၅၆၇၈၉၁၀၁၁၁၂၁၃၁၄ NRC_State *
ကဆနကတလကနနကဘလကလတကလထကလနကလဝကလသကသနခတနခပနခမနခဥကခဥတခဥနငဇနစကနစကရစသနဆကပဆလကညနနတငနတဆနတမနတသနထခနထဥတဒပယဓကနပဖနပရနပလနပလဘပလသဖပနဗမနဘတလဘအနမကနမမကမမတမမနမမရမယနမရကမရနမလနယမပရတနရတရရထနရဘနရသနရသယရအနရဥနလမနလရနလဝနဝလနဝသနသကနသကလဟမလအတနအရတအရသ township_5 *
ကစနကပနကရနကသတကသနခမကတဂနတဓနတပနတဝနတသနတသရထဝနပကမပတနပနလပလနပသနဖမနဗအရဘပနဘလနမကနမဂတမတရမမနမလနမလလမအနမအရရပနရဖနလကနလလနဝကနသရခ township_6 *
ဝခကကတကကတတကပနကမနကလနခမနဂဂနငဖနစတရစလနဆတကဆပနဆပဝဆဖနဆမနဆလနတကကတတကထလနနပနနမနနမဥနလနပကနပခကပခတပဖနပမနဘရနဘလနမကနမခကမခနမတနမထနမနမမဘနမမနမလနမသနမအရရစကရတနရနခရမကရဥမသရနသလနဟမနအမရအလနဥမန township_8 *
ကခတကဆနကပတကပဘကဘနကမကနကမတကမနကဝတကသနခမစခမနခအဇငဇနငသရစကတစကနစကရစတတစတနစသနဇဇနဇပသဇယသညဥနညဥလတကနတတကတတဥတပတတမနတယနတသနဒဏသနတကနထကပကခပကစပခနပတနပတလပနလပဗသပဘနပမနပလနပသကပသနပဥလဗမနမကနမခနမတနမတမမတရမတလမထလမနကမနတမနမမနလမပနမဖနမဘနမမတမမနမယတမယမမရကမရတမရနမရပမရဘမရမမရသမလနမသကမသနမသရမဟမမအဇမအရမဥလရနခရဘနရမတရမသရဥနလဆနလဝနဝတနဝထနသကမသခကသစနသတနသဓနသပကသပတသရပအတနအဓနအမဇအမရဥတသ township_9 *
ကကခကကနကကပကကရကငနကစနကတခကတနကထခကပကကပတကပနကမကကဝနကသနစခနစမနဇကနညလပတငနတဆနတတခတမနတဝနထတပဒဥနဓမနဓဥနနတလပခတပခနပစနပဇနပတကပတခပတတပတနပဓနပဖနပမနပလနပဝကဖခနဖတနဖပနဖမနဖဥနဗတနဗမနမကနမခနမစနမညနမတနမလနရကတရကနရတနရတရရပတရမတလကနလပတလပနလမတလမနဝခမဝတနဝမနသဝတသကနသနပသပနသလပသလဝသဝကသဝနအတနအပနအဖငအဖနအဘနအမန township_7 *
ကကနကကရကခနကစကကဆကကမနကလနတကနတဆကတတနတယနတအနနတလပကနပအနဖပနဖအနဗအနဘကဆဘလနဘသဆဘအနမဝတလစနလဘနလသနသကနသတကသတနသထနအအန township_3_4_13 *
ကကနကတနကထနကမရကလနကသနခဆနခဇနစတနဆခနဇလမတဖနတမနတလနတဝနပခကပဒနပမနဖပရဘလနမကမမဆနမဒနမဓနမပနမမနမလခမလတမလနမလမမအနမဥနယပရရမနလဘနလမတလမနသကနသခရသတနသထနသထလသဖရသဗရသမရသလနအမနအလန township_10 *
ကတနကမတကမနခတဒခဘဒဆဒနတနနနမနပကတပညနပတအပဘတဗမနမကကမကတမကထမကနမကရမခဘမဂဒမစနမညနမထနမဘနမမနမအနရကနရနကလခနလဂနလမနဝမနသတနဟခနဟပနအခကအဂယအပနဥမန township_1 *
ကမနကလနကလဝကဝနဂလနဒမဆဒမသပတကဖဆနဖရဆဘလခမဂတမဂဒမရနရကနလကနလမတအလနဥကလ township_2 *
ကတနကတလကဖနကမနခတနခမနဂမနဂလမစတနစသနဉထသတကတတကနတစနတဖနဒတဂဓဓနပဏကပဏတပတနပတပပသတဖအနဘတသဘလနဘသတမဂနမတနမပတမပနမလမမအတမအနမဥနရပနရဗနရမနရသတသကနသတနအမန township_11 *
ကကကကခကကခတကခနကခရကစကကတကကတတကတနကတလကထကကထထကပတကပနကမကကမတကမထကမနကမရကမလကလထကလနကလဝကသရခခနခဂတခပနခမနခရကခရနခရဟဂဟနစကနစခဂစခနစခမစဂနစဇနစတနစပနစပရဆကခဆကနဆခနဆဖနတကကတကတတကနတခနတခလတဂတတငနတတကတတထတတနတတပတထနတထပတပနတဖနတဗတတမတမတတမနတဝနတသနထကနထတတထတပထတမထမနထသနဒကတဒဂဆဒဂတဒဂနဒဂမဒဂရဒဒရဒနပဒပနဒဖနဒရနဒလနဓခနဓဓနဓနဖဓနမဓလနနကတနကယနမနပကတပခနပဂတပစတပဆတပဇတပဇနပတတပတနပဗကပဘတပဘနပမနပရတပလနပသတပသနပအတဖပနဖဟနဗကတဗကလဗဂတဗတကဗတတဗတထဗတနဗတလဗထထဗပနဗဘတဗမနဗယနဗရကဗလနဗလဗဗဟတဗဟနဘကတဘကလဘတထဘဓနဘပတဘလနမကတမကနမကမမခနမဂကမဂတမဂဒမဂဓမဂနမဂလမဂဝမဆနမဇတမညနမတကမတညမတတမတထမတနမတလမထလမဒဂမဒနမဓနမနကမနမမပနမဘတမဘနမမကမမတမယကမရကမရတမရနမလတမလနမဝတမသနမဟနမအတမအနမအပမအရမဥနယပသရကတရကနရကမရတနရပတရပသရမကရယခရလနရသပလကတလကနလကပလစနလတတလတနလတပလထနလပတလပနလဘနလမကလမတလမနလမရလမသလရနလလနလဝနလသနလသမလသယလသရလသသလအနဝတနသကကသကဃသကတသကနသကလသခကသခနသဃကသဃတသဃနသညကသတကသတတသတနသနပသပနသမနသရနသလကသလတသလနသလပသလရဟခနဟသတအခကအခနအဂတအဂနအစနအစရအဆနအတနအထကအပနအဖနအမတအမနအလကအလနအသနဥကကဥကတဥကထဥကနဥကပဥကမဥကလဥတကဥတတဥတမဥပတဥသတ township_12 *
ကကတကကထကကနကကလကခနကတခကပတကပနကပရကဖနကမနကမရကလနခလနဂသတငဆနငပတငရကငသခစခမစနဖစနမဆကလဇလနညတနညနတတကနတကလတခမတပတတလတတသတထကကဒဂပဒဂမဒဒရဒနဖဓနဖပစလပတတပတနပတပပဖနပဖမပမနပသနပသယပသရဖပနဖမနဗကလဗတထဗသနဘကလဘတလမကလမဂပမဆနမတနမပကမပနမဘနမမကမမတမမနမလမမသနမအနမအပမအဖမအမရကနရသယလပတလပနလမတလမနဝခမဝတနသကတသခမသပနသမနဟကကဟသတဟသနအခမအဂဒအဂပအမတအမန township_14 *
နိုင် ဧည့်ပြု NRC_type *
CHDB ရှိစာရင်းအမှတ် *
ဝယ်ယူမည့် အိမ်ခန်းတန်ဖိုး၏ (၃၀%) ပြည့်စုဆောင်းပြီးသည့် ရက်စွဲ
လက်ရှိပင်စင်ထုတ်ယူနေသောပင်စင် စာအုပ်မိတ္တူ (သို့) E Penison Card မိတ္တူ*
Allowed file types: jpg jpeg png pdf doc docx ppt pptx rar zip.
လျှောက်ထားသူအပါအဝင် သန်းခေါင်စာရင်းဝင်/ အတူနေ မိသားစုဝင်များ၏ တစ်လစုစုပေါင်းဝင်ငွေ
အဘမှတ်ပုံတင်နံပါတ် * ၁၂၃၄၅၆၇၈၉၁၀၁၁၁၂၁၃၁၄
ကတနကမတကမန fathers_nrc_township *
နိုင် ဧည့်ပြု fathers_nrc_type *
မှတ်ချက်။ (ဝင်ငွေရလမ်း ဖော်ပြပေးရန်) *
(မိသားစုဝင်များ၏ အလုပ်အကိုင်နှင့် တစ်လ ဝင်ငွေမှန်ကုန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ဌာန/ ကုမ္မဏီ အကြီးအကဲ၏ ထောက်ခံစာ ပူးတွဲတင်ပြရန်)
ဦးစားပေး ဝယ်ယူလိုသည့် အိမ်ရာ
ဦးစားပေး ဝယ်ယူလိုသည့် *
သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ (သို့မဟုတ်) ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံစာ *
လျှောက်ထားသူ၏ အီးမေးလ်လိပ်စာ *
လျှောက်ထားသူသည် ပူးတွဲပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာပါမည်ဟု ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။
လျှောက်ထားသူသည် ပူးတွဲပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာပါမည်ဟု ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။ *
Ask the Minist
© 2017 Ministry of Construction. All rights reserved.